China Inogadziriswazve 3 Side Seal Pouches fekitori uye vanotengesa | NEMANGWANA
Inogona kudzokororwa 3 yeparutivi chisimbiso homwe. Bhegi rakavharwa pamativi matatu richipa yakapusa, inodhura-mhinduro mhinduro kune hombe kana zvidiki zvakawanda zvechigadzirwa. Aya mahomwe inzira inodhura, inokodzera kuwedzera pasherufu hupenyu hweakawanda ezvigadzirwa zvekudya.
Yedu yazvino sarudzo inosanganisira isiri-chipingamupinyi uye chipinganidzo 3 padivi chisimbiso homwe ine zvinotevera zvinotevera mabhenefiti:
Inogona kudzokororwa 3 yeparutivi chisimbiso homwe. 3 padivi chisimbiso zvikwama ndiwo mutsago mhando homwe Uine kuvhura kune rimwe divi. Yedu inogadziriswazve matatu epadivi masaga masaga anogona kumhanya nekumhanyisa mumuchina kubva kuzadza chisimbiso (FFS) muchina. Hukuru hwakagadziridzwa sekudikanwa kwako. Zvinhu zvakasiyana siyana zvinowanikwa kwauri, senge rakajeka hwindo rekutarisa mukati mechigadzirwa, kubvarura notch kuti ive nyore kuvhura, zipi kuti iite nyore kuvhura uye kuvhara, uye yakaturika gomba kuti uwane kuratidzwa kwakanaka pasherefu, kutenderera makona ekubata mushe.
Inogona kushandiswa kurongedza chikafu kana chisiri chikafu chigadzirwa, michero yakaomeswa, nyore-kutora chikafu chechipfuwo, zviwitsi, mabhurosi emazino.Sangana nezvinodiwa zvemunhu zvigadzirwa, Tinogona kugadzira bhegi rako raunofarira se "T-shati chimiro". Inogona kuve yakareba uye yakatetepa kurongedza zvigadzirwa zvakaonda, senge bvunzo pepa, kana inogona kuve yakavhurika yakawandisa kune chikafu chinoda kukwikwidza.
Inogadziriswazve matatu emukati masaga masaga akanaka kurongedza zviwitsi, chikafu chakagwamba nechando, chikafu chemhuka, nezvimwe zvigadzirwa.
Inogadziriswazve matatu epadivi masaga masaga anogona kunge ari ekudhinda kana asiri-eprinta sarudzo, zvichitibvumira gadzirisa akasiyana mabhegi saizi.
Inogadziriswazve matatu emukati masaga masaga anozopa yepakati kana yakakwira chipingamupinyi chehupenyu hwakareba pasherefu
3 divi rakasimbiswa bhegi rakagadzirwa kubva kune yakawanda-firimu firimu, zvichireva kuti maturakisi akasiyana akasunganidzwa pamwechete kuti vagadzire yakakwenenzvera midziyo kuchengetedza zvirimo zvitsva.
Notch yemisodzi inowanzo kuverengerwa muhomwe iyi kubvumira kuvhurika kuri nyore. Zvichienderana nezvaunoda, tinogona kusiya chero divi rimwe rakavhurika, kuti zvigadzirwa zvako zvigone kuzadzwa neruoko kana kuzadzwa nemaoko.
Inogonesa nzvimbo yakaturika yekutengesa
Pashure: 3 mativi akavharika & pombi pombi
Zvadaro: Inogadziriswazve Flat Bottom Pouches